Sina paty taratasy miavaka miaraka amina sobika feno boaty fanomezana fanomezana boaty boaty mpamokatra sy orinasa | Yuxingyua
Paty paty manokana miaraka amina boaty soavaly fanomezana boaty fanomezana
Boaty fanomezana tsotra
Ny anjara asan'ny boaty fanomezana
Fisehoana mahafinaritra sy miavaka izay afaka mamonosina zavatra, ary boaty fonosana ivelany handravahana sy handikana zavatra.
Ny boaty fanomezana dia fonosana fanomezana azo ampiharina miaraka amin'ny tanjona lehibe amin'ny fanomezana fanomezana ho an'ny havana aman-tsakaiza hanehoana fitiavana. Izy io dia fanitarana miasa amin'ny fomba famonosana sy ny filan'ny fiaraha-monina. Ny boaty fanomezana dia fisehoan'ny fontsika. Ny fanomezana fitiavana ataontsika samirery na ireo vokatra fitiavana novidintsika, tsy an-kanavaka, dia mila fonosana izay afaka maneho ny vokany, na tantaram-pitiavana izany, na mifono mistery, na gaga, na taitra, rehefa miadana ianao Manokatra dia miadana toa ny manokatra ilay ala miafina ao am-ponao ary aseho azy ireo eritreritra samihafa tianao holazaina. Io no dikan'ilay boaty fanomezana.
Vata fanomezana ambony embossed ambony
Boaty fanomezana azo namboarina miaraka amin'ny tsipìka miloko isan-karazany fanomezana
Hevi-baovao momba ny boaty fanomezana
Ny boaty fanomezana dia avy amin'i Goffret cadeau amin'ny teny frantsay ary Giftbox amin'ny teny anglisy
Tena malaza izy io ankehitriny.
Fomba fiasa vaovao amin'ny fanomezana fanomezana. Tsy tena vokatra ny boaty fanomezana, fa karatra 15-20. Ny karatra tsirairay avy dia maneho karazana hetsika fanaovana traikefa nahafinaritra, izay nofidian'ilay olona nahazo ilay boaty fanomezana araka ny safidiny manokana. Ity foto-kevitra ity dia nampidirina tany Sina avy tany amin'ny firenena eropeana toa an'i France sy Belzika. Ireo orinasan-boaty fanomezana dia novolavolaina tany amin'ny tanibe dia misy ny Danlanshe frantsay sy ny Box Gift, izay manana herijika lehibe eo amin'ny tsena.
Tsy mitovy amin'ny fanomezana nentim-paharazana, ny boaty fanomezana fanandramana nofantenin'ny tena manokana dia andiana fifaliana sy serivisy samihafa voafantina tsara, ary izay atolotra dia traikefa tokana sy mahafinaritra. Amin'ny ankapobeny, ny boaty fanomezana fanandramana nofinidy tena dia manana endrika kely sy tsara tarehy. Ny boaty fanomezana tsirairay dia misy karatra tsara tarehy na boky torolàlana voafantina samirery, izay maneho orinasa am-polony sy ny tolotr'izy ireo. Ny mpandray dia afaka misafidy malalaka serivisy tiany. Misy ihany koa karatra fanandramana ampiasaina hanamarinana ny hetsika momba ny mombamomba sy ny boky, ahafahanao mamandrika sy mankafy ilay traikefa maimaimpoana.
Ny boaty fanomezana fanandramana azo ekena dia teraka tany Frantsa tamin'ny taona 2003. Tao anatin'ny fotoana fohy dia nanjary maodely fanomezana be mpitia eran'ny tsena eropeana izy ary niely tsikelikely tany Japon, Brezila, Etazonia, Aostralia, sns. Ohatra, dakotabox any Frantsa sy ny orinasa frantsay Danlanshe, izay vao niditra ny tsenan'ny tanibe sinoa, dia manome hetsika traikefa nahafinaritra miaraka amin'ny toetra frantsay ary manome mpanjifa traikefa fanompoana mahafinaritra sy be fiheverana.
Boaty fanomezana tsara tarehy manga
Fanontana namboarina, boaty fitehirizana lamba tsara
Previous: Volon-koditra namboarina miaraka amina boaty firavaka fanomezana amina kitapo kanto
Manaraka: Namboarina manokana loko loko perla isan-karazany embossed firavaka fanomezana boaty
Volon-koditra namboarina miaraka amina taratasy mahafinaritra b ...
Namboarina manokana loko pearlescent ambonin'ny em ...